Tuesday,7Aug, 2018 1:42 PM
काठमाडौं, २२ साउन – तपाईंको मोबाइल फोन सेट हरायो ? फुट्यो या बिग्रियो ? अब धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन । किनभने हरायो भने किनिदिने र टुटफुट भएमा बनाइदिने कम्पनी नेपालमै खुलेको छ ।
एकराज पाठक / रासस